Waa tee kooxda Taangiga dagaal soo hordhigatay garoonkeeda ka hor isku aadka Champions League? – Gool FM
Waa tee kooxda Taangiga dagaal soo hordhigatay garoonkeeda ka hor isku aadka Champions League?
Haaruun August 29, 2019
(Yurub) 29 Agoosto 2019. Isku aadka heerka guruubyada Champions League ayaa la sameynayaa caawa, iyadoo koox waliba oo ka tirsa 32-ka kooxood ee ka qeyb galaya ay ogaan doonto guruubka ay gashay.
Kooxda ka dhisan dalka Serbia ee Red Star Belgrade ayaa taangi dagaal soo hordhigtay garoonkeeda si ay taageerayaal ugu soo jiitaan taasoo dood weyn ka dhex dhalisay taageerayaasha kubada cagta ee isticmaala baraha bulshada.
Waxa ay kooxdu daaha ka qaaday taangigeeda ka hor ciyaartii isreebreebka oo ay ugu soo baxeen heerka guruubyada Champions League ee ay la ciyaareen kooxda reer Switzerland ee Young Boys waxayna ugu talogaleen inay ku dhiiro-geliyaan taageerayaashooda.
RASMI: Isku aadka wareegga saddexaad ee tartanka Carabao Cup oo la sameeyey… (Yay ku aadeen kooxaha waa weyn ee Premier League?)
Adidas oo si rasmi ah u soo bandhigtay kubadda lagu ciyaarayo heerka guruubyada Champions League.. + Sawirro